Indlu Yeholide Ezilungele Intsapho eyi-200m ngaselunxwemeni - I-Airbnb
Indlu Yeholide Ezilungele Intsapho eyi-200m ngaselunxwemeni
Indlu yeemitha eziyi sq sq xa iyonke. Kufuphi nolwandle, iivenkile zokutyela kunye nezinto ezinokwenziwa yintsapho. Uza kuyithanda indawo yam njengoko nje imizuzu emithathu ihamba iye elunxwemeni, ithule, ipholile kwaye ineendawo ezinkulu zangaphandle. Ilungele izibini ezithandanayo, abahlobo kunye neentsapho ezinabantwana.
Ngokuthatha isigqibo sokuqesha le ndlu intle, ungaqiniseka ukuba iholide yakho iza kuphola kakhulu ibe yeyohlobo lwayo. Siliqhuba eli shishini njengentsapho ibe sisoloko sisenza okungaphaya kokulindelweyo kubathengi bethu!
Thanda into yokuba indlu enendawo yokuphola intle ibe inombala oluhlaza opholileyo kunye negadi yayo kwaye inazo zonke izinto ezifunekayo ukuze uhlale kuyo nanini na enyakeni. Ilungele iintsapho ezinabantwana. Enye into ebalulekileyo kum, kukuba ungavuka nje ekuseni, uhambe imizuzu emibini kwaye apha uqubha elunxwemeni! Okokugqibela, kukuba indlu enendawo yokuphola ijongwa ngathi iphantse ibe phakathi kunxweme lwaseCyprus ibe loo nto yenza kube lula kwaye kukhawuleze ukufikelela kwizixeko ezibalulekileyo ezifana neLarnaca, iLimassol, iNicosia neAyia Napa.
Yindawo ethe cwaka nekhuselekileyo kuyo yonke imini nobusuku ibe loo nto yenza ikhetheke. Nangona indlu inomgama weemitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni, unokuva ngokucacileyo amaza xa uhleli everandeni ebusuku.
Njengoko eli lishishini losapho, silapha ukuze sincede iindwendwe zethu nanini na kufuneka.